Yako 'Kodzero yekufa Kubva pa COVID-19' inofanirwa kuvimbiswa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Yako 'Kodzero yekufa Kubva pa COVID-19' inofanirwa kuvimbiswa
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sénata weAustralia Pauline Hanson
Hapana Mushonga unodiwa!
Senator weAustralia Hanson anoramba achisimbirira kuti aive akarurama kunyangwe paakaudzwa kuti majekiseni ekudzivirira aripo akapasa bvunzo dzakakodzera uye anoisa njodzi yakaderera kuhutano zvichienzaniswa nekutapukirwa nehutachiona.
Anti-Vaccination Insanity yakataurwa naSeneta Pauline Hanson
Senator Pauline Hanson vanoti majekiseni eECOVID-19 haana kuongororwa zvakanaka.
HE Pauline Hanson anozivikanwa nenyaya dzinopesana pamusoro pechirongwa chekudzivirira. Iye anotsigira anti vax mutsigiri.
Mashoko aHanson akatsoropodzwa nevashandi vezvehutano uye kuseka pamhepo.
Mutungamiri webato reAustralia-kurudyi One Nation, Senator Pauline Hanson, akataura kuti bhizinesi nehurumende havafanirwe "kumanikidza kana kudheerera" vanhu kuti vabaiwe jekiseni uye kuti vanhu vanofanira kuva nesarudzo yekuramba kubayiwa nhomba ye COVID-19, kunyangwe vanofa nehutachiona.
Izvoppears kwakadaro kufambas ari kuendererawo kuUK uye nedzimwe nyika.
"Ipai vanhu mukana, ivai nemajekiseni… uye kana vanhu, seni, vasina mushonga, ndinowana COVID-19 ndofa nazvo, ndicho chisarudzo changu," akadaro Hanson.
Kutaura kuti majekiseni eECOVID-19 haana kuongororwa zvakanaka, seneta akati iye '”haazodheererwa kana kutyisidzirwa nekuba mushonga.”
Hanson anoramba achisimbirira kuti aive akarurama kunyangwe paakaudzwa kuti majekiseni akange aripo akapasa bvunzo dzakakodzera uye akaisa njodzi yakadzikira kuhutano zvichienzaniswa nekutapukirwa nehutachiona.
Hanson anozivikanwa nekuita makakatanwa maringe nezve chirongwa chiri kuenderera chekudzivirira. Mwedzi wapera, vagadziri pane yakakurumbira nhepfenyuro yeSydney vakasarudza 'kubuda' mamwe emashoko ake ekurwisa nhomba panguva yekubvunzurudzwa kwakatepfenyurwa nekunonoka kwemasekondi makumi matatu.
Kutaura kwaHanson kwakashorwa nevashandi vezvehutano uye kusekwa zvakanyanya online nevatauri vachiti nekuparadzira mameseji ekudzivirira hutachiona Hanson anoisa hupenyu hwevamwe panjodzi. "Benzi rine ngozi," mumwe munhu akanyora online.
Kubaya nhomba kuchamanikidzwa kune vese vagari vekuchengeta-vashandi muAustralia kubva munaGunyana 17. Zvisinei, Prime Minister Scott Morrison yazivisa nhasi kuti hurumende yenyika haina hurongwa hwechirwere chejekiseni rakakura.
"Tinoziva kuti mune in-kuvaka kukurudzira mune mushonga," akadaro PM. "Kashoma kuti ubatwe [nehutachiona], kashoma kuti urware zvakanyanya uye usanyanya kuipa shamwari."
Parizvino, 22.5% yevaAustralia vane makore anodarika gumi nematanhatu vakabaiwa jekiseni zvizere uye 16% vagamuchira mushonga mumwe chete, sekureva kwehurumende.
Marriott pane Mission ine mahotera matsva muIndia ...
William R MacPheat anoti:
Nyamavhuvhu 10, 2021 pa18: 49
Mishonga yekudzivirira zvirwere haina kuongororwa zvizere! Iwo ekuyedza, ekukurumidzira kushandiswa chete. Hapana kufunga kwakapihwa kune mamwe matanho ekudzivirira ane mashoma kana asina mhedzisiro, kunyanya vhitamini D3. Hapana munhu anogona kutaura zviri pamutemo kuti zvinokonzerwa nemishonga yekudzivirira zvirwere hazvina kunyanya kuipa sehutachiona. Muchokwadi pane varapi vanoti vanodavira kuti majekiseni ekudzivirira aya pakupedzisira anouraya vanhu vazhinji kupfuura hutachiona. Hatina ruzivo rwenguva refu pamajekiseni. Uri kutsausa vanhu munyaya iyi.